ဘ၀သံသရာကွေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Local Guides » ဘ၀သံသရာကွေ့	6
Posted by manawphyulay on Jan 7, 2015 in Local Guides, Photography, Travel |6comments
ဘ၀သံသရာတံတားရဲ့ အထင်ကရ မှတ်တိုင်
ကျွန်မတို့ တည်းတဲ့ ဟဲဟိုးကနေ တောင်ကြီးဘက်အတက်မှာ တောင်ခြေက အေးသာယာမြို့သစ်ကို မရောက်ခင်လေးမှာ ကျွန်မတို့ကားဦးတည်ရာတစ်လျှောက်က မြေပြန့်ကြီး…။ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ် ပထ၀ီမှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ ဟဲဟိုးလွင်ပြင်ကြီးပေါ့…။ အဲဒါကိုကျော်လာတော့ တောင်စောင်းမှာ ထင်းရူးပင်တွေ စီရရီနဲ့ တောင်ပေါ် ပြန်တက်လာသည်…။ တစ်ကွေ့နှစ်ကွေ့လောက် သွားပြီးတော့… မြင်လိုက်ရတဲ့ မီးရထားလမ်း….။ အဲဒါ နာမည်ကြီး ဘ၀သံသရာကွေ့ပေါ့….။ ဘ၀သံသရာ တံတားလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ရထားလမ်းက တောင်ကို တပတ်ပတ်ပြီး ပထမဖြတ်သွားတဲ့ နေရာအောက်ကနေ ဖြတ်ပြီး…. ဟဲဟိုးလွင်ပြင်ဆီ ခွေကာ ခေါက်ကာ ဆင်းသွားတယ်….။
ဘ၀သံသရာ ရှည်လျား ထွေပြား တစ်သွားထဲ သွားရတာ….
သံသရာလည်နေသမျှ အားလုံး တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန် တစ်နေရာရာမှာ ဆုံတွေ့ကြရမှာပါ…
ဘ၀သံသရာ တံတားပေါ်မှ အဝေးသို့ ရှုမျှော်ခြင်း
Mr. MarGa says: ဒလည်ခတ်ပြီး လည်ပတ်နေတယ်
အဲ့ ခုံတန်းလေးမှာ အေးအေးဆေးဆေးဆေး ထိုင်ချင်သဗျ
manawphyulay says: ခုံတန်းလေးက ညနေ နေ၀င်ချိန်မှာ ထိုင်ရင် ပိုပြီး ထိုင်လို့ကောင်းတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အေးမြတဲ့ အငွေ့အသက်လေးနဲ့ နေ၀င်ချိန်ရှုခင်းလေးကတော့ တကယ့်ကို လွမ်းမောဖွယ်လေးပါပဲ Mr. MarGa ရေ…. နှစ်ယောက်သား သွားထိုင်ပါလား…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: မလုပ်ပါနဲ့
ကျန်တဲ့သူတွေက သူတို့ မခေါ်ရကောင်းလားဆိုပြီး စိတ်ကောက်ကုန်လိမ့်မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Maung Thura says: ရထားနဲ့ ခရီးရှည် မထွက်ဖူးသေးဘူး ။
တစ်ခါတော့ ထွက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်.. ။
ဘယ်ဆီ ဘယ်ဝယ်လို့တော့ မသိသေး…
မြစပဲရိုး says: တောင်ကြီး ကို ရထား နဲ့ သွားတုန်းက အဲဒီ တံတားပေါ်က ဖြတ်ခဲ့ဘူး လိုက်တာ အမှတ်တရ တွေထဲက တစ်ခုပါ။
မနော တကယ်ဘဲ ဘွပြောင်း သွားပြီလား။
Many Congratulations ပါနော်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2374
aye.kk says: မနော